Simannaa ABO: Nageenya Finfinnee eeguuf Poolisiin Federaalaa qophoofneerra jedhu - BBC News Afaan Oromoo
Simannaa ABO: Nageenya Finfinnee eeguuf Poolisiin Federaalaa qophoofneerra jedhu
'Nageenya Finfinnee eeguuf qophoofneerra,' Poolisii Federaalaa
Simannaa Hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) obbo Dawuud Ibsaafi jila isaanii bor biyyattii galuuf qophiin Finfinneetti taasifamaa jiru dargaggoota simannichaaf qophiirra jiraniif dargaggoota magaalaa finfinnee gidduutti walitti bu'iinsa uumeera.
Har'a Gaazexessitootni BBC hojiidhaaf Finfinnee kutaalee garagaraa keessa socho'an naannoo Atobiis taraa fi Piyaasaattii sochiin uummataa wayyaa qabaachuu taajjabaniiru.
Markaatoottii manneen daldalaa gariin banaa ta'anis kaan cufaa ta'uu arganiiru.
Kutaa Gullallee naannolee akka phaawloos, Wingeetii fi Madaaniyaalamitti manneen daldalaa fi nyaataa akkasumas sochiin geejibaa harki caalaan cufaa dha.
"Dargaggoonni Finfinnee gurmaa'anii akka dargaggoonni Oromiyaa irraa dhufan hin darbine dhowwaa daandiitti ba'anii amala hin taane agarsiisuufi waanta gaarii hin taane mullataniiru." jechuun Komishinarri Poolisii Federaalaa Zeyinuu Jamaal dubbataniiru."Amma egaa tarkaanfii barbaachisu fudhanneerra. Akka bittinaa'an taasifneerra. Dargaggoonni Oromiyaarraa dhufanis akka naagan seenan gooneerra."
Komishinar Zeyinuu Jamaal qophiin simannaa guyyaa boorii akka nageenyaan xumuramuuf poolisiin qophii barbaachisaa ta'ee hunda goochuu isaa dubbataniiru.
"Qophii taasisuun nurra jiru hunda taasifneerra. Rakkoo uumuuf kan yaalu yoo jiraate karoora to'aachuuf nuu barbaachisu basnee qopheefannee jirra," jechuun qophii simanna ABO booriif qophaa'oo ta'uu isaani Komishinar Zeyinuu dubbatniiru.
Naannoo phaawloositti alaabaan ABO manneen gamoowwan irratti fannimanii jiru.
Dargaggoonni Alaabaa magariisa keelloo fi diimaa qabu baatan heddunis naannichatti mul'atu. Walitti bu'iinsa garuu hin argine.
Qaamoleen nageenyaa hedduun magaalitti keessa bobba'anii mul'atu.
Robii darbe Alaabaa addichaa magaala Finfinnee keessatti fannisaafi halluu diimaa magariisa diimaa dargaggoota dibaa turan mormuun dargaggoota Finfinnee alaabaa Itoophiyaa urjii ofirraa hin qabne qabatan gidduutti walitti bu'iinsi dhalate Finfinne yaaddoo keessa galchee jira.
Waaree booda kana garuu haalli hanga tokko tasgabbaa'uu isaa qeerroon Oromoo Finfinnee tokko tokko BBC'tti himaniiru.
Magaalaa akka Amboo, Mogor, Burraayyuu, Dambii Doolloofi magaaloota lixa Oromiyaa irraa namootni hedduuu waaree booda kana gara Finfinnee seenaniiru.
Namootni Finfinneetti imalaa turan akka BBC'tti dubbatanitti, Qeerroon Finfinnee dhimmi nageenya sodaachisaa yoo tureyyu haala bareedaan isaan simataniiru.
Yeroo gara Finfinnee seenuuf jedhanitti gurmuu dargaggoota mormii taasisaa jiraniin yoo dhaabamaniiyyu, boodarra garuu raayyaan ittisa biyyaa namoota sana bittinsee namootni seeraan sakkataa'amnii akka galaniif gargaaru isaa dargaggooni kutaawwan Oromiyaa irraa imalan BBC'tti himaniru.